भोलीदेखि उडान बन्द गर्ने निर्णय, कारण यस्तो ! – List Khabar
Home / समाचार / भोलीदेखि उडान बन्द गर्ने निर्णय, कारण यस्तो !
admin November 25, 2021 समाचार Leaveacomment 71 Views
काठमाडौं । सुर्खेत विमानस्थल भोली मंसिर १० गते शुक्रबारदेखि बन्द हुने भएको छ । विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले विमानस्थल बन्द गर्न लागिएको नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
विमानस्थल बन्द भएसँगै यस विमानस्थलबाट हुने उडानसमेत बन्द हुने भएको छ ।
धावनमार्ग मर्मतका लागि विमानस्थल १० गतेदेखि माघ दोस्रो सातासम्म बन्द हुनेछ । सुर्खेत विमानस्थल बन्द हँदा वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपालगञ्जको विमानस्थललाई वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गर्ने छन् ।
विमानस्थल बन्द हुदा कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्ला तथा काठमाडौंसँगको सिधा हवाइ सम्पर्क बिच्छेद हुनेछ ।
यसैबीच, निजी क्षेत्रको बुद्ध एयर लाइन्सले ८ नयाँ जहाज थप्ने भएको छ। दुर्गमलाई सुगम बनाउने योजना अन्तर्गत नयाँ जहाज थप गर्न लागिएको एयरलाइन्सले बताएको छ। बुद्धले सन् २०२३ को शुरुवातदेखि नयाँ जहाजबाट हवाईसेवा चालु गर्ने भएको छ।
नयाँ जहाजको खरिद तयारीका लागि बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत ट्वीनअटर विमान निर्मातासँग छलफल गरेका छन्। ‘प्रबन्ध निर्देशक बस्नेत ट्वीनअटर विमान निर्माता कम्पनी भाइकिङ एयर लिमिटेडका सेल्स एन्ड मार्केटिङ सिनियर एक्जुकेटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट रोव मोराचसँग दुबई एयर शोमा भेटवार्ता भएको छ,’ बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र कर्णले भने।
हाल मुख्य सहरमा उडान गरिरहेको बुद्धले नयाँ जहाजले दुर्गममा उडान गर्ने जनाएको छ। दुर्गममा उडानका लागि पूर्वमा मन्थली, पश्चिममा पोखरा, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लागि नेपालगञ्ज विमानस्थललाई हव बनाएर जहाजले उडान गर्ने छ।
सूचना अधिकारी कर्णले २०२३ को सुरुवातबाटै ४ वटा जहाजले उडान भर्ने जनाएका छन् । बुद्ध एयरले सन् २०२४ मा थप २ वटा र क्रमश २०२५ र २०२६ मा क्रमश २–२ वटा जहाज थप्ने योजना बनाएको छ ।
बुद्धले अबको ५ वर्षसम्ममा ८ जहाजले दुर्गममा उडान भर्ने जनाएको छ।
Previous चितवनमा हुन् लागेको महाधिवेशनको अघिल्लो दिन इतिहाँस मै नभएको घटना भएपछि…
Next भोलि मङ्सिर १० गते शुक्रबार, आकस्मिक धनलाभ हुने योग, शुभ फलदायी रहला दिन? हेर्नुहोस राशिफल!